Ihe mere m ji kpọọ akaụntụ nnabata | Martech Zone
Ezi enyi, Jason Falls, nwere ezigbo Facebook melite lambasting ọ bụla na-elekọta mmadụ mgbasa ozi onye debanyere aha na Facebook maka a akaụntụ kwadoro. Mmelite ya adịghị mma maka ọrụ, mana ọ kpalitere ọgba aghara na ike mgbasa ozi mmekọrịta-ka-adị. Oge ya maka ndị folks debanyere aha malitere na "d" wee kwụsị na "akpa", hehe.
A akaụntụ kwadoro a na-egosipụta akara ngosipụta doro anya nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụ acha anụnụ anụnụ na profaịlụ onye ahụ na Twitter ma ọ bụ Facebook. Nyochaa pụtara na Twitter ma ọ bụ Facebook wepụtara oge iji hụ na onye n'azụ akaụntụ ahụ bụ onye ị chere na ha bụ. Na elu larịị, ọ na-ada ka oké echiche… anyị achọghị ka a ghọgbuo ndị mmadụ.
Akpọrọ m asị nyochaa akaụntụ maka di na nwunye:
Ọ bụghị mmadụ niile nwere ike itinye akwụkwọ - dika Scott Monty tinye ya, 1% nwere ohere ịnweta akaụntụ gosipụtara. Gịnị kpatara mmadụ niile? Mgbe m nyochara azụmaahịa m na Google+, enwere m ike ịme ya ọsọ ọsọ na enweghị nsogbu. Ọ bụ ma megheere onye ọ bụla.
Ọ pụtara karịa - ihe niile na - ahụ anya na ntanetị. Ma ọ bụ ogwe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ maka webụsaịtị echedoro, a nnukwu onye ofufe ma ọ bụ ndị na-eso ụzọ, peeji nke wikipedia, ma ọ bụ baajị sitere na webụsaịtị adịchaghị, ihe ngosi ọ bụla nke mmetụta na ntụkwasị obi na web ihe ma na-emetụta omume ndị mmadụ na ntanetị.
N'ihi na enwere na enweghi na nyochaa akaụntụ, Ndi kwuo uche ya na-ewere oche azụ. Ugbu a ụfọdụ ndị ga - eme ka uto ha dị ngwa - ọ bụghị n'ihi uru ha na-enye netwọkụ ha - mana n'ihi na ha nwere akara ngosi akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụ na-acha anụnụ anụnụ. Nke ahụ akara akara decries “m dị mkpa karịa onye ọ bụla ọzọ” na, N'ihi ya, ga mee ngwangwa Fans na-eso.
Ọ bụrụ na ị kwenyeghị m, ị gaghị aghọta egos na azụmaahịa a. Ndị mmadụ na-scrambling iji nweta ndị a kwupụtara akaụntụ… ọbụna na-enweghị ihe na-egosi na onye ọ bụla na-tinye n'ọrụ ha njirimara na-ekwesịghị ekwesị. Ha na-achọ ịgba mbọ inweta ha maka na ha ma na obere akara ndụ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụ na-acha anụnụ anụnụ bụ ọla edo. Ọ ga - eduga na ndị na - eso ụzọ, ohere ikwu okwu na ide ihe, na - n'ikpeazụ - azụmaahịa karịa. Ọ bụghị n'ihi ikike onwe onye, ​​mana n'ihi akara ngosi a na-ahụ anya.
Mepee usoro nyocha nye onye ọ bụla chọrọ ya. Dị ka anyị na-etinye akwụkwọ maka asambodo SSL ma ọ bụ azụmaahịa Google, tinye usoro ebe onye ọ bụla nwere ohere iji nyochaa njirimara ha. Mee ya nye onye ọ bụla, ma ọ bụ emela ya ma ọlị.
Jun 3, 2013 na 10:42 AM
Daalụ maka ikwu ihe anyị niile na-eche kemgbe ogologo oge ugbu a!
Jun 4, 2013 na 11:48 AM
akaụntụ ndị dị na ya ga-akpalite nchebe zuru oke. Akpọrọ m ya asị